”Fadlan noloshiisa badbaadiya!” – Donald Trump oo markii ugu horreeysey wax ka baryey dalka Iiraan | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Fadlan noloshiisa badbaadiya!” – Donald Trump oo markii ugu horreeysey wax ka...
”Fadlan noloshiisa badbaadiya!” – Donald Trump oo markii ugu horreeysey wax ka baryey dalka Iiraan
(Tehraan) 05 Sebt 2020 – MW Maraykanka ee Donald Trump ayaa dalka Iiraan ka codsaday inay cafiyaan Navid Afkari oo ah nin ciyaara legdinta oo 27-jir ah oo toogasho lagu xukumay.
“[Ku] madaxda Iiraan, si wayn baan u qiimayn lahaa haddii aad badbaadin lahaydeen nafta ninkan dhallinyarada ah” ayuu Trump soo tweet gareeyey.
Maamulka Garsoorka Iiraan ayaa sheegay in Afkari toogasho lagu xukumay kaddib markii uu diley Hassan Torkaman, oo u shaqaynayey shirkad biyood magaalada koonfureed ee Shiraz, xilli ay socdeen dibed baxyo ka kacay dhaqaale darrada dalkaasi oo uu ciyaaryahanku qayb ka ahaa.
Maxkamad goboleed ku taalla Shiraz ayaa Afkari dil ku xukuntay, balse walaalihii Vahid Afkari iyo Habib Afkari, ayaa lagu kala xukumay 54 iyo 27 sanadood oo xarig ah sida ay u kala horreeyaan. 3-duba waxay asal ahaan ahaayeen shaqaale dhismo.
Xukunka oo la ridey Luulyo, balse lagu dhawaaqay Agoosto, ayaa wuxuu keenay dhaleecayn maxalli iyo caalami intaba ah, iyadoo ay hooyadii Behieh Namjou, oo muuqaal soo duubtay ay sheegtay in wiilasheeda si xun loo jir diley si ay dembiga u qirtaan. Webka Garsoorka ee Mizanonline, ayaa lagu beeniyey warkaasi, iyadoo legdamaha la xukumay lagu tilmaamay “dilaaga muwaadin dembi laawe ah”.
Balse Hassan Younesi, oo ah qarreenka Afkari ayaa isna sheegay in macmiilkiisu aanu wax door ah ku lahayn dilka dhibanaha, mar uu war siiyey wakaaladda ILNA.
Previous article”Madasha Xisbiyada oo daaqadda ka tuurtay Shirkii Dhuusamareeb 3 oo ay horay u taageereen (Maxaa dhacay kahor inta aysan mowqifkooda bedelin?)
Next articleTurkiga oo dhisay jid lagu sheegay ”midka ugu casrisan” dalkaasi & adeegyada uu leeyahay + Sawirro